Naqshad Cabbiraad ah sida loo ilaaliyo boggaaga marka laga bilaabo inuu noqdo Hacked
Internetku waa kheyraad ballaaran oo leh awood xadidan. Natiijo ahaan, internetkaMashruuc wuxuu bixiyaa siyaabo badan oo ayadoo magac iyo ururadu ay la kulmi karaan dhagaystayaashooda iyo sidoo kale suuqa aan xadidneyn.Ganacsatada intooda badani waxay qaadaan habka e-commerce si ay u dejiyaan website-yadooda iyo kor u qaadaan ololaha suuq-geynta. Waxaa sidoo kale jirabloggaro badan oo leh blogyo badan oo guulo badan oo online ah - tappeto in tinta unita. Marka ay socdaan goobaha e-commerce, amnigooda waa hal arrin ka mid ah kuwa kale oo badanwaxaad u baahan tahay inaad tixgeliso.
Marka aan samayno shabakadaha, waxaan diirada saarnaa bixinta adeegga, qanacsanaanta macaamilka, iyoracfaanka UX. Inta badan farsamooyinka suuq-geynta ee goobaha isticmaala waxaa ka mid ah hababka Search-Optimization (SEO) hababka muhiimka ahraadinta iyo isku xirka. Suurtagalnimada hackerka leh lahaanshaha internetka maahan fikrad ka gudubta maskaxda dadka intiisa badan.
Marka barashada sida looga hortago weerarro xooggan oo xoog leh, waa muhiim inaad barato qaarfarsamooyinka kuwaas oo ka hortagi kara qaar ka mid ah ciridka guud. Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Senior Sare Adeegyada Dijitaalka ah, waxay soo bandhigaan astaamaha aad u nugul ee u nugul iyo siyaabaha looga fogaado:
Weerarkan waxaa ku jiri kara fariimo qalad ah iyo sidoo kale foomamka feylka ee internetka. Markaad sameyso bog,waxaa muhiim ah in la sameeyo magaca bannaan ama bannaan. Qalabkani wuxuu diidi karaa akhbaarta qiimaha leh, kuwaas oo ay isticmaali karaanautomate weerarada ay. Xaaladaha kale, fariimaha qaladku waxay u baahan yihiin inay ereyo macquul ah isticmaalaan. Qaladka qaar ayaa ku siin kara fure u ah khaanadahanuglaanta nidaamka..
Tilmaamahan wuxuu awood u siinayaa xisaab in uu xiro ka dib markii uu isku dayo dhowr isku-day galo oo dhowr ah.Oggolaanshaha tijaabooyin xadidan oo kooban waxay ku siinaysaa xisaabta user ee dhibbanaha faa'iidooyinka badbaadada ee khatarta. Isticmaalka erey ammaan ah ayaa noqon karaqiyaas muhiim ah oo dadku isticmaali karaan si kor loogu qaado amniga boggooda internetka. Captcha codes ayaa sidoo kale ka hortagi kara xisaabaadka automatic ah taas oowuxuu ka iman karaa bots. Waxay sidoo kale hubiyaan in ay tahay qof dhabta ah oo isticmaalaya goobta, ma aha robot.
Waa lagama maarmaan in la isticmaalo sirta nabdoon gaar ahaan guddiga maamulka ee boggaaga.Lambarka sirta ah ayaa ka horjoogsan kara boggaga internetka ee weerarada fudud. Lambarka sirta ah sida 12345 waa ammaan la'aan waxayna keeni kartaa weerar dabiici ah.Waa muhiim inaad isticmaasho koronto-dhaliyayaasha si ay ula socdaan erey gaar ah. Waxa kale oo muhiim ah in la bedelo sirtaada. Adigawaxay kor u qaadi kartaa ammaanka boggaga internetka sidan.
Waxaa jira siyaabo fara badan oo loo marayo jariidadaha ay ka heli karaan shabakad. Qaar ka mid ahsiyaabaha ugu caansan ee loo adeegsado shabakadaha shabakadaha internetka waxaa ka mid ah SQL Injection iyo sidoo kale Cross Site Scripting. Waa muhiimsi kor loogu qaado ammaanka boggagaaga iyo sidoo kale macaamiishaada iyada oo loo marayo hababka naqshadeynta ee ku yaala tilmaamaha kore.Waxaad awood u yeelan kartaa inaad kor u qaaddo habka bogga uu u shaqeeyo iyo sidoo kale kahortaga fursadda ah in hacker uu ku guuleysto inuu weeraro website-ka.Ammaanka isticmaalka internetka ee boggagaaga ayaa ku jira gacanta. Khasaaradu sidoo kale waxay xadidi karaan macluumaadka qiimaha macmiilkasida kaararka deynta. Waa muhiim inaad tixgeliso arinkan marka la samaynayo website-yada.